Alexandra Pereira: သြဇာ၊ ဖက်ရှင်နှင့်လှုံ့ဆော်မှု။ - Hanukeii
En Hanukeii ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်ချမှတ်ထားသောလူနေမှုပုံစံများနှင့်ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းတို့မှနေ့စဉ်လှုံ့ဆော်ခံရသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအဝတ်အစားနှင့်အသုံးအဆောင်အမှတ်တံဆိပ်များ၏လွှမ်းမိုးမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏လက်လှမ်းမီမှုသည်ဖန်သားပြင်သို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားရှိုးကြီးများတွင်ရုပ်ရှင်များနှင့်အတူတကွယှဉ်တွဲခဲ့သည်။ ယခုနှင့်လူမှုကွန်ယက်များကြီးကြီးမားမား ၀ င်ရောက်လာမှုနှင့်ပြန့်ပွားမှုတို့ကြောင့်လူမှုကွန်ယက်များပေါ်တွင်ဖက်ရှင်လွှမ်းမိုးသူများသည်စုဆောင်းမှုတစ်ခုဖန်တီးရန်ကြီးမားသောခြေလှမ်းမစမီထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိသောအဓိကကိုးကားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီတခါတော့ Galician အမျိုးသမီးတစ် ဦး ရဲ့စတိုင်နဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ငါတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ ငါတို့က Alexandra Pereira အကြောင်းပြောနေတာဘဲ @LovelyPepaအချို့ကသူမအားသိသည်နှင့်အမျှဖက်ရှင်ကို ၀ ါသနာပါ ၀ င်သောရိုးရှင်းသောအမျိုးသမီးသည်ထိုအချိန်ကလုံးဝမသိသောကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။ ဘလော့ဂါများ.
ဖက်ရှင်ဘလော့ဂ်တစ်ခုထားရှိပါ။ ဘယ်သူကအဲဒါကိုစိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုလို့ထင်လိမ့်မလဲ။ ကောင်းပြီ၊ မင်းမကြိုးစားရင်မင်းဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောကြတယ်။ အမှန်တရားကသေးငယ်တဲ့အရာကနေစခဲ့တာ သတင်းစာ သူသည်ဟောင်းနွမ်းသော Instagram filter များနှင့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်၊ ၎င်းသည် ၂၀၁၀ သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားသောအစိမ်းရောင်များနှင့် vignettes အရောင်များသည်ယခုအချိန်တွင်ထိပ်ဆုံးနေရာတွင်ရှိသည်၊ ၎င်းသည်ယနေ့လူကြည့်အများဆုံး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤဖက်ရှင်နှင့်စတိုင်ဆေးညွှန်းဆရာများ၏ကွန်ယက်များ၌ထုတ်ဝေမှုသည်ယူရို ၅၀၀၀ ၀ န်းကျင်နှင့် Hugo Boss, Dolce & Gabbana, Cartier ကဲ့သို့သောအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စာချုပ်များချုပ်ဆိုထားသောအရာများသည်စိတ်ကူးယဉ်မရနိုင်သောပမာဏများဖြစ်သည်။ အနှစ်တစ်ထောင်နှင့်နှစ်စဉ်လစဉ်သန်း ၂,၅၀၀,၀၀၀ လက်ခံသောဘလော့ဂ်တစ်ခုနှင့်အတူ Alexandra Pereira သည် Chiara Ferragni နှင့် Aida Domenech (Dulceida) တို့နှင့်အတူဥရောပတွင်အကြီးဆုံးဖက်ရှင်လွှမ်းမိုးမှုများထဲမှတစ် ဦး အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုတည်ဆောက်သည်။
သူသည် Galicia Vigo တက္ကသိုလ်၌ဥပဒေနှင့်စီးပွားရေးဘာသာရပ်ကိုသင်ယူခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းသူမကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်ဖန်တီးရန်ကြိုက်သောအခါ ၀ တ်ပုံစားပုံကသူမအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေအကြောင်း၊ သူမသိတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေတောင်ရှိပုံကိုအမြဲသိသည်။ ထိုအချိန်က Instagram သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်ဓာတ်ပုံများဝေမျှရန် app တစ်ခုအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့ပြီးကြော်ငြာကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်မခန့်မှန်းနိုင်သောကြောင့်၎င်း၏လက်လှမ်းမမီနိုင်ပါ။ သို့သော် Alexandra သည်အမြော်အမြင်ကြီးသူဖြစ်ပြီးသူမသည်သူ၏ဘလော့ဂ်ကို Instagram နှင့်လင့်ခ်ချိတ်လျှင်သူမ၏သူငယ်ချင်းများသည်သူမ၏စာမျက်နှာကိုစတင်လည်ပတ်နိုင်ကြောင်းသိသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက်သူ့ဘလော့ဂ် "ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Pepa" သူမဟာလစဉ်လည်ပတ်မှုအတော်အတန်ရောက်နေပြီ၊ အဝတ်အစားနဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်တွေကသူမထုတ်ကုန်တွေကိုမြှင့်တင်နေသမျှ၊ သူမပို့လိုက်တဲ့အချိန်၊ Alexandra ကသူမမှာသူ့ပုံရိပ်ရှိဖို့အရေးကြီးကြောင်းနဲ့သူမမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာအဲဒီအချိန်မှာသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ တံဆိပ်အမျိုးမျိုးကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အထူးခြားဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲများအနက်တစ်ခုမှာသူမသည်ဖိနပ်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအတွက်ပုံရိပ်ကိုပြုလုပ်သောအခါ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော၊ စတိုင်ကျ။ စျေးသက်သာသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည့်သူမအပေါ်လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ အောင်မြင်မှုသည်ဤလှုံ့ဆော်မှုစတင်ခြင်းတစ်လအတွင်းဤကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ရောင်းအားကိုသုံးဆမြှင့်တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ရယ်စရာကောင်းသောအချက်၊ ဘာကြောင့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Pepa? သင်သည်တိရစ္ဆာန်ချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်လျှင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရှိခဲ့လျှင်ငါတို့သည်သူတို့၏အမည်များကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းတို့ကိုအကောင်းဆုံးခွဲခြားသတ်မှတ်သည်ကိုသိသည်။ ကောင်းပြီ၊ Alexandra ၏ကိစ္စတွင် Lovely Pepa သည်သူမ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည့် French Bulldog ဖြစ်ပြီးသူ၏ခွေးကဲ့သို့သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်သည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်နှင့်အနှစ်သာရကိုသူမနှစ်ပေါင်းများစွာယနေ့ထိသိမ်းထားခဲ့သောနာမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဝတ်အစားအမှတ်တံဆိပ်ကိုလူတိုင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။
သူတို့ကအကောင်းဆုံးအမွှေးနံ့သာတွေကိုပုလင်းသေးသေးလေးတွေကလာတယ်လို့ပြောကြတယ်။ Alexandra ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရှုပ်ထွေးစေသောအရာသည်သူမ၏အမြင့်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ Influencer ကအင်တာဗျူးတွေမှာသူမနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားခဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ် အနိုင်ကျင့် သူ၏အဖော်များအနေနှင့်သူ၏အမြင့် ၁.၆၀ မီတာကိုရယ်ရယ်မောမောလုပ်လိုသည်။ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှအရာတွေကနည်းနည်းပိုရှုပ်ထွေးလာတယ်၊ Alexandra ကသူမရဲ့အရွယ်အစားအတွက်အဝတ်အစားရှာရတာပိုတောင်ခက်ခဲလာမယ်ဆိုတာကို Alexandra သဘောပေါက်ခဲ့တယ်။
ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအဖြစ်ချဲ့ထွင်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ပိုသောအခါ၎င်းသည်သူမတစ် ဦး တည်းမဟုတ်ကြောင်းနှင့်မိန်းကလေးများစွာသည်အရပ်ရှည်သူများအတွက်အရွယ်အစားနှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာနေပြီးမှအဝတ်အစားကိုညှိရန်အဝတ်အစားဖြတ်ပိုင်းကိုဖြတ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်တိုတောင်းသောလူများအတွက်ပိုမိုပါဝင်နိုင်ပြီးစံပြအဝတ်အစားတံဆိပ်တစ်ခုဖန်တီးရန်စဉ်းစားခဲ့သည်။ ချစ်စရာ Pepa စုဆောင်းမှု
သူ့ပုံစံကသူ့ကိုဒီလိုသတ်မှတ်တယ် Street Style Chic ဖြစ်သည်။ Alexandra Pereira သည်၎င်းကိုစတင်ချိန် မှစ၍ ဤအရာကိုမပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်းမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ သင်ကရောစပ်ထားသော chic အဝတ်များကို သုံး၍ ကြည့်ကောင်းအောင်အမြဲအလေးပေးခဲ့သည်။ အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်အံ့မခန်းကြည့်ဘို့
ကပ်ရောဂါသည်အရာအားလုံးကိုဇောက်ထိုးပြောင်းသွားစေသည်မှာဖက်ရှင်လောကကိုပင်ထိခိုက်စေခဲ့သည်မှာသေချာသည်။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သည်အိမ်မှာ နေ၍ အပြင်ထွက်ရန်အဝတ်အစားများ ၀ ယ်ခြင်းသည်ခရီးစဉ်တွင်မပါ ၀ င်ပါ။ ထို့ကြောင့်စျေး ၀ ယ်ထွက်ခြင်းသည်နေ့၏အစဖြစ်ခဲ့လျှင်သင်စတိုင်လ်ကျစွာထွက်ရမည်။ အဲဒီအခါမှာစတိုင်လ်နဲ့ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေကသူတို့ရဲ့အစောင့်ကိုနည်းနည်းလျှော့လိုက်ပြီးဖက်ရှင်လှည့်လာတယ်။ Confy ဖက်ရှင်.
Alexandra သည်ဘေ့စ်ဘော ဦး ထုပ်ကို blazers များနှင့်ခြေချင်းဝတ်ဘွတ်ဖိနပ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ကာနေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတွက်မရှိမဖြစ်အသုံး ၀ င်တစ်ခုအဖြစ်ဘေ့စ်ဘော ဦး ထုပ်ကိုတည်ဝံ့ရန်ပထမဆုံးသြဇာလွှမ်းမိုးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူမ၏အဆိုအရ၊ ဦး ထုပ်သည်နေ့နေသာသောအခါ၌သာဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်ကမ်းခြေသို့ရောက်လျှင်အနည်းငယ်ကွဲသင့်သည်။ အလက်ဇန္ဒရာသည်သူမ၏ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းကိုပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အ ၀ တ်တစ်ထည်နှင့် ဦး ထုပ်တို့နှင့်ရောစပ်ကာသူမ၏ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကိုပြသသည်။
သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် YouTuber အကြောင်းနောက်ထပ်သိချင်သောအချက်တစ်ခုမှာသူမသည် Sofie Richie, Presley Gerber နှင့် Kate Moss တို့နှင့်အတူလမ်းလျှောက်ပွဲတစ်ခုကိုဝေမျှခဲ့သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဖက်ရှင်ပြပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူမဟာမင်းရဲ့ဘလော့ဂ်မှာပထမဆုံး entries တွေလုပ်နေတုန်းက
ဒီသြဇာသက်ရောက်မှုရဲ့ကွန်ရက်တွေကိုနည်းနည်းစီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးငါတို့အားလုံးအဲဒါကိုတွေ့ခဲ့တယ် မတ်မတ် အကြံပြုသည်၊ အဓိကအသုံး ၀ င်ကိုသတိမပြုမိပါစေနှင့်။ နေကာမျက်မှန်။ သူမရဲ့ကွန်ယက်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုမှာဖန်တီးသူက နေချင်စဖွယ် Pepa သူ့ရဲ့ဗီရိုကိုငါတို့ကိုပြတယ် လမ်းလျှောက်ဗီရို မည်သူ့ကိုမျှအိပ်မက်မမက်ပါ၊ သို့သော် ပို၍ ထူးခြားသည်မှာသူ့အတွက်ဖြစ်သည် ရပ်နေ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်မျက်မှန် ၅၀ ကျော်ရှိသည်။ အရူး!
သူမအတွက်၊ သူမ၏မျက်မှန်များကိုရိုးရှင်းစွာ ၀ တ်ရန်၊ သူမ၏ဗီဒိုထဲတွင်ရှိသမျှအရာအားလုံးနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ကောင်းပြီ၊ အထူးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအတွက်သုံးသောပျော်စရာပုံစံတစ်ခုနှင့်တစ်ခုရှိကောင်းရှိနိုင်သည်၊ ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့အားလုံးပုံစံတူကိုင်တွယ်ကြသည်။ အနက်ရောင်သို့မဟုတ်လိပ်ခွံဘောင်များ၊ XXL မှန်ဘီလူးများနှင့်ဘောင်များပါ ၀ င်သည်။ ကြောင်မျက်လုံး y လိပ်ပြာ။
မင်းအကြိုက်ဆုံးတွေလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကဲ့သို့ပန်းရောင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်လိပ်ပြာပုံပါသောနေကာမျက်မှန်များ ရွာပန်းရောင်. ဒီဇိုင်နာများအတွက်မူပုံမှန်မဟုတ်သောနေကာမျက်မှန်ကိုရဲရင့်သူများအသုံးပြုသည်။ သို့သော်မျက်နှာပြင်၌စူးစမ်းလိုစိတ်ရှိခြင်း၊ သဘောတရားပုံစံများကိုချိုးဖျက်ခြင်း၊ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းသစ်များရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသဘောအရရဲရင့်သည်။ ဒီတောင်အမျိုးအစားကသူမကိုစိတ်အေးချမ်းသာနေ့ရက်ကိုကုန်ဆုံးစေခဲ့ပေမယ့်သတိမပြုမိခဲ့ဘူး။ ထို့အပြင်၎င်းသည်နွေးထွေးသော pastels မှကြက်သွေးရောင်အနီရောင်သို့အဝတ်အစားအရောင်များနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သောဘက်စုံသုံးမျက်မှန်တစ်မျိုးဖြစ်လာသည်။
လွှမ်းမိုးမှုကိုနှစ်သက်သောမျက်မှန်အမျိုးအစားမှာအနက်ရောင်အမျိုးအစားဖြစ်သည် ကြောင်မျက်လုံးငါတို့နဲ့တော်တော်တူတယ် ပစိဖိတ်အနက်ရောင်မရ။ Alexandra သည်ရိုးရှင်းသောအခြေခံများ ၀ တ်ဆင်ခြင်း၏အရေးပါပုံကိုအလွန်သံသယ ၀ င်သည်။ ဒီမျက်မှန်ကသူမနဲ့အရာအားလုံးနီးပါးအတူပါတာကိုငါတို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့သူတို့မျက်နှာပေါ်ကိုတင်ဆောင်လာတဲ့တည်ငြိမ်မှု၊ ကြော့ရှင်းတဲ့စတိုင်လ်တွေကဒီမျက်မှန်တွေမှာငါသတိထားမိတဲ့ဖက်ရှင်ဆေးညွှန်းဆရာကိုယုံကြည်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။
သံသယမရှိဘဲ၊ Alexandra သည်သူမ၏စတိုင်လ်နှင့်ရိုးရှင်းမှုကိုရည်ညွှန်းလိုသောမိန်းကလေးများစွာအတွက်အတုယူစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်၎င်း၏အကြောင်းအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေကာမျက်မှန်နှင့် ဦး ထုပ်များပေါင်းစပ်မှုပုံစံတစ်ထောင်ကိုသိရန်စိတ်ကူးများဖြင့်ပြည့်စေသည်။ ခရီးနှင့်အတွေ့အကြုံများသည်သူ၏ဓာတ်ပုံများကကျွန်ုပ်တို့အားအိပ်မက်ဘဝတစ်ခုကိုပြသသည်။ အဲဒါကိုမင်းဘယ်လိုတွေ့တာလဲ။